🥇 Ikhathalogi ye-Franchise
Indawo Yomuntu Siqu
Faka i-franchise mahhala
Iklabhu yezobuciko bokulwa
Isitolo sezimpahla zezemidlalo
Isitolo sokudla okunempilo
Indawo yokuthenga imali
Isitolo sebhatshi lesikhumba
Isitolo sezingubo esiku-inthanethi ku-Instagram
Isitolo sezingubo nezicathulo
Isitolo sezingubo zabesilisa
Isitolo sezingubo zemidlalo
Isitolo sezingubo zokusebenza
Auto izingxenye esitolo
Isitolo sezinto zemoto
Iklabhu lezemidlalo lezingane
Iphuli yokubhukuda yezingane
Isikhungo semfundo sezingane
Izikole zebhola lezingane
Ukudla komgwaqo kwezingane
Indawo yokwenza izinwele
Indawo ekubhakelwa kuyo
Indawo yokudlela yase-Armenia
Indawo yokudlela yase-Italy
Indawo yokudlela yaseGeorgia
Indawo yokudlela yaseTurkey
Indawo yokudlela yaseVietnam
Indawo yokudlela yemifino
Indawo yokuphuzela utshwala
Isitolo samanani esigxilile
Isitolo semishini yasendlini
Isitolo sezimpahla zasendlini
Isitolo sezimpahla zikagesi
Isitolo sobunjiniyela benhlanzeko
Isitolo sokudla kwasolwandle
Isitolo sokurekhoda seVinyl
Isitolo sokuzila ukudla
Indawo yokuphisa utshwala
Ukukhiqizwa kwamakhemikhali asekhaya
Ukukhiqizwa kwemikhiqizo yepulasitiki
Ukukhiqizwa kwesikulufu okuzenzela
Ukukhiqizwa kwezakhiwo zensimbi
Ukukhiqizwa kwezindawo zokudlala
Ukukhiqizwa kwezitini okuguqukayo
Ukwenziwa kokugqoka izingubo
Ukwenziwa kwephepha langasese
Ukwenziwa kwezimpahla zamakhemikhali ezizenzakalelayo
Indawo yokulungisa izinsiza
Isitolo sezingxenyekazi zekhompyutha
Isitolo sokumboza phansi
Amakhukhamba Ahamba kancane
Ichibi eligobile 2
Isilinganiso se-Akhtuba RP
ISt. Petersburg FAKA AMA-TBCITES (id, id_tbCountries, name, id_tbLangs, sysname) VALUES (USA)
I-Andorra la Vella
UBandar Seri Begawan
UCagayan de Oro
Ayikho inkokhelo yokuqala yesamba
Ukutshalwa kwemali kuyadingeka $
Ukutshalwa kwemali okuncane kuze kufike ku- $ 500
Ama-franchise ashibhile angaphansi kwama- $ 1000
Ama-franchise aphansi afinyelela ku- $ 2000
Ukutshalwa kwezimali okuncane ngaphansi kwama- $ 4000
Kushibhile okungadonswa kuze kufike ku- $ 10000
I-Franchise enotshalomali oluncane kuze kufike ku- $ 20000
I-franchise yezomnotho efinyelela ku- $ 30000
Ukudonswa okuncane kuze kufike ku- $ 40000
Ama-franchise ebhizinisi ashibhile ngaphansi kwe- $ 50000
Ibhizinisi elinotshalo mali lifinyelela ku- $ 75000
Okukhulu kudonswa kuze kufike ku- $ 100,000
Ama-franchise amakhulu angaphezu kwe- $ 100,000
Ukuthengiswa kwe-Franchise nobukhosi
Ama-Franchise akhokha ngokushesha - ngenyanga engu-1
Ama-franchise akhokha ngokushesha - kusuka enyangeni engu-1 kuya ezinyangeni ezi-3
Inkokhelo ye-franchise kusuka ezinyangeni ezi-4 kuya onyakeni ongu-1
Isikhathi sokubuyiselwa kwe-franchise singaphezu konyaka ongu-1
Ungakhetha amanani amaningi
Okwamadolobhana amancane, amadolobhana amancane, idolobhana elincane
Ama-franchise anenzuzo, anenzuzo enkulu
Vula isitolo se-franchise
Izitolo ezinezimpahla ezishibhile
I-franchise eku-inthanethi, isitolo esiku-inthanethi
I-Franchise kusuka ekuqaleni
Inhlangano isebenza isikhathi esingakanani
Uneminyaka engu-1 kuya kwengu-3 ubudala
Uneminyaka engu-4 kuya kwengu-10 ubudala
Uneminyaka engu-11 kuya kwengu-20 ubudala
Iminyaka engaphezu kwengu-20
Sesha ngegama lomkhiqizo nombhalo wesikhangiso. Ungasesha futhi ngamanothi akho.
Imininingwane yami yangasese
Bhalisa noma ungene ngemvume ukuze usebenzise imininingwane yakho
Buka ngokuhamba kwesikhathi
Incwadi ayizange ibhekwe
Kunemiyalezo emisha kimi
Khombisa yonke imibandela yokusesha
Izikhangiso ezitholakele: 983
I-USU - Universal Accounting System
Imali yokuqala: 0 $
Ukutshalwa kwemali kuyadingeka: 0 $
Inkokhelo. Inani lezinyanga: 1
Isigaba: Izinhlelo, Ukubalwa kwezimali
Izinhlelo zanoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi! Akunakwenzeka ukuthi ibhizinisi ngaphandle kwesoftware lilawule umsebenzi webhizinisi nayo yonke imikhakha yalo yokusebenza. Nsuku zonke inkampani enjalo ingena ekulahlekelweni okukhulu ngoba ayikwazi ukuhlaziya ubuthakathaka bayo iyithuthukise. Isixhumanisi esibuthakathaka singaba yinoma yini: into engathandwa yinhlangano eqhubeka iyithenga ukuze ithengiswe; insizakalo engalethi inzuzo elindelekile ngenxa yokukhangisa okungalungile; abasebenzi bebhizinisi, ukusebenza kwabo kahle okunganele; nokunye okuningi. Yiba ngummeli ezweni lakho noma edolobheni bese uhola engxenyeni ye-solvent kakhulu - ebhizinisini!
Ingabe ikhona ividiyo
Buka incazelo egcwele
Ungathenga ukufinyelela kwe-premium ukuze ubone izibalo ezinemininingwane
Imali yokuqala: 4500 $
Ukutshalwa kwemali kuyadingeka: 22000 $
Ubukhosi: 200 $
Inkokhelo. Inani lezinyanga: 8
Isigaba: Indawo yokwenza izinwele
Incazelo ye-franchise yi-franchisor: Ukushefa kwamadoda nezindawo zokulungisa izinwele "i-BORODACH" ibhizinisi elinenzuzo engxenyeni ethembisayo yemakethe yomkhakha wezinsizakalo engadingi isipiliyoni ekulungiseni izinwele. Kusukela ngosuku lokuqala lokubambisana, inkampani idlulisela kancane kancane kuwe lonke ulwazi oludingayo ukuze uhlele kahle umsebenzi we-barorhop yakho ye- "BORODACH". Ngenxa yokuhlangenwe nakho kochwepheshe, ama-franchise aseBORODACH asebenza ngempumelelo eRussia. Ungakuqinisekisa lokhu ngokumane uvakashele enye yamasalon amaketanga. Thenga i-franchise ye- "BORODACH" futhi ube yingxenye yenkampani, ujoyine iqembu labaholi! Iphakethe eline-franchise enemininingwane lifaka phakathi: -Ukuthola imibhalo eyinhloko nokunamathiselwa kumphathi womuntu -Usizo ekukhetheni izakhiwo. Ukuhlaziywa kwendawo kanye nomphathi ukuze ukhethe inketho ephumelela kakhulu yokusebenza ngempumelelo kwe-salon - Izixazululo ezilungiselelwe zonke izinkinga zomthetho ezihlobene nokuvulwa nokusebenza, okuzokuvumela ukuthi ukhethe ifomu lenhlangano elilula kakhulu kwakho
IBHOLA IBHOLA 12
Imali yokuqala: 6000 $
Ukutshalwa kwemali kuyadingeka: 8200 $
Ubukhosi: 4 %
Inkokhelo. Inani lezinyanga: 7
Incazelo ye-franchise yi-franchisor: I-BROW BAR 12 yinkampani yokuqala yaseBelarusian egxile ezinsizeni zokulungisa amashiya. I-BROW BAR 12 namuhla yile: • Umkhiqizo owaziwayo; • Izakhiwo ezahlukahlukene zamabha we-brow - kusuka ku-mini-studio kuya ku-salon; • Amakhasimende angaphezu kwama-25,000 ngonyaka; • Ibhizinisi elinenzuzo eqhubekayo emakethe ekhulayo; • Iqoqo lezinsizakalo elisebenza kahle kanye namazinga omsebenzi acacile; • Ithimba lochwepheshe abangama-20; • Uhlelo lokuqeqesha nokuthuthuka kwamakhosi; • Ukusebenza ngezimonyo zobungcweti; • Izinhlelo ezingabonakali zokulawula nokubalwa kwemisebenzi. Konke lokhu kuvumela i-BROW BAR 12 ukuthi iqhubeke ingumholi engxenyeni yayo kusukela ngo-2014 nokukhulisa inani lamakhasimende ajwayelekile! I-BROW BAR 12 franchise izokusiza: Qala ibhizinisi lakho ngokushesha - inkampani inika imiyalelo ecacile futhi ihambisane nenqubo yonke. Nciphisa inani lotshalo-mali - inkampani izothuthukisa iphrojekthi, ifune abahlinzeki, ukuqeqeshwa kwabasebenzi, ukusetha izinqubo nezinhlelo.
Ukutshalwa kwemali kuyadingeka: 10000 $
Inkokhelo. Inani lezinyanga: 6
Isigaba: Izembatho zabesifazane, Isitolo sezingubo
I-Femme abesifazane yokugqoka i-franchise ingeyeqembu lezinkampani iLady-Tex. Umlando wokuthuthuka kwayo kwenkampani i- "Lady-Tex" yaqala ngonyaka we-2004 eBelarus futhi yacishe yazisungulela emakethe yaseRussia njengomkhiqizi webhulukwe eliphezulu neziketi zabesifazane. Manje i- "Lady-Tex" inkampani enkulu enezindawo zokukhiqiza eBelarus, omunye wabaholi engxenyeni yezingubo zabesifazane e-ofice, isitayela sempilo yedolobha, kanye namasudi nezingubo zomcimbi okhethekile. Le nkampani ihlose ukwandisa ubudlelwane bebhizinisi, ikakhulukazi nabalingani abavela eRussia, ilandela izitayela eziphambili zemfashini futhi izama ukwenza imikhiqizo yayo ithakazelise kumbuthano wabathengi ogxile ezingutsheni ezifashisayo, ezisezingeni eliphakeme futhi ezingabizi.
Imali yokuqala: 30000 $
Ukutshalwa kwemali kuyadingeka: 3000 $
Inkokhelo. Inani lezinyanga: 12
Isigaba: Isikhungo Sezingane, Ukukhula kwengane
Incazelo ye-franchise yi-franchisor: izizathu ezi-2 zokuvula iklabhu lezokuzijabulisa lezingane zakho: - akuyona inkambiso yokonga ezinganeni, - ezweni lethu kusenezindawo zokushoda kwezikhungo ezihlela ukuzithokozisa okusezingeni eliphakeme nokuhlukahlukene kwezingane. Luyini inethiwekhi yezikhungo zokuzijabulisa zezingane i-BAZILLION: - izikhungo zokusebenza eMinsk, Brest, Mogilev; - iminyaka engaphezu kwengu-3 yomsebenzi ophumelelayo; - izixazululo ezinhle zezikhungo ezinezindawo nezindawo ezahlukahlukene; - Umjikelezo wakho ophelele wokuklama, uku-oda kanye nokufakwa kwemishini; - iqoqo lezinsizakalo zezingane zeminyaka ehlukene - okuhehayo, imishini yama-slot, ama-animators, amathilomu, amaholide; - zonke izinhlelo ezidingekayo zokuhlela umsebenzi osebenzayo wabasebenzi. Izinzuzo ze-BASILLION franchise: * sebenza ngaphansi komkhiqizo owodwa othembekile ngamakhasimende ethu * ukunciphisa inani lotshalo-mali lokuvula isikhungo sezingane
Ukuthenga i-franchise kulula, into esemqoka ukukhetha imodeli yebhizinisi evumelana nawe. Ungathenga konke okudingayo nge-franchise, ngoba, njengomthetho, unikezwa lonke ibhulokhi lemininingwane efanelekile yokuqala ibhizinisi. Ukuthenga i-franchise nakho kuyasiza ngoba ungaqala ibhizinisi eliletha izinga elibonakalayo lenzuzo ngaphandle kwezindleko zokumaketha. Umthengisi ukukunikeza lonke ulwazi oludingayo ukuqala ukwenza imali ngesikhathi sokurekhoda. Udinga nje ukuthenga i-franchise futhi ujabulele konke okuhlangenwe nakho okwenziwe abanye abantu ngaphambi kokuba uthathe isinqumo sokungena kuleli bhizinisi. Vele, udinga ukuthola i-franchise evumelana nezintshisekelo zakho namakhono akho. Isibonelo, uma ungenayo imali yokuvula uchungechunge lokudlela, lapho-ke ngeke ukwazi ukuthenga i-franchise. Vele, izinkampani ezinikeza ithuba lokuthola i-franchise hlola abathengi abangaba khona, futhi amaphutha kule nqubo ayivelakancane ngempela. Uma uthatha isinqumo sokuthola i-franchise, khona-ke uyi-franchisee, umthengi oqondile wale modeli yebhizinisi.
Ungaba usomabhizinisi futhi usebenzise igama eselivele lizwakala kuwo wonke umuntu. Ubuye uthole umqondo owenziwe ngomumo futhi ungaqambi lutho kusuka kusilayidi esingenalutho ngokuphelele. ERussia, ukuthengiselana ngezimali sekuzuze ukuthandwa isikhathi eside futhi ngo-2021 kungenye yezinhlobo zebhizinisi ezibonakala zinikeza imali elula ngemuva kokutshalwa kwezimali. Akuyona yonke into elula kangako, kepha ukuthenga i-franchise kusalula kakhulu kunokuqamba ibhizinisi kusuka ekuqaleni. Ukugwema izindleko zokwenza i-logo, ukuqeda isidingo sokwakha isitayela sakho nedizayini yakho, konke kwenza kube lula ukukhipha imodeli yebhizinisi lakho. Kwanele ukuthenga ulwazi oludingekayo bese ulusebenzisa ukukhuphula ngokushesha ivolumu yemali engenayo yesabelomali.
Ukuthenga i-franchise akusho njalo ukuyithenga unomphela. Ungaqasha ithuba lokusebenzisa umkhiqizo nawo wonke amathuluzi eza nawo isikhashana. Imvamisa, ama-franchisees akhokha imali yesamba. Umnikelo oyisamba uqondwa njengethuba lokusebenzisa uhlobo oluthile lomsebenzi wezamabhizinisi, imodeli yebhizinisi esivele ikhona, ukuzuza izinsizakusebenza zezezimali. Ungakwenzela wena, usebenzise ubuchwepheshe obukhona, udle izinto zokusetshenziswa ozihlinzekile, futhi ufake uphawu lokuhweba noma uphawu. Isebenza kahle cishe kunoma iyiphi indawo nakunoma yiliphi izwe. Kodwa-ke, ungahle ungakwazi njalo ukuthenga i-franchise futhi uyithuthukise esifundeni sakho. Kuyadingeka ukuthi ufunde ngokucophelela ukuthi kungenzeka yini ukuthi usebenzise lolu hlobo lomkhiqizo nebhizinisi endaweni yangakini. Uma uthatha isinqumo sokuthenga i-franchise, khona-ke kuyadingeka ukwenza izinguquko ezithile kumodeli ekhona.
Lokhu kungaba ukungezwa kwanoma iyiphi imininingwane encane, ukucaciswa, okuyisici esifundeni sakho kuphela. Inikeza ukuthutheleka okukhulu kwamakhasimende futhi into enjalo ingasetshenziswa njengengxenye yomkhankaso wokukhangisa. Lapho usuthathe isinqumo sokuthenga i-franchise, udinga ukuthatha isinyathelo ngokushesha ukuze utshalomali luzokhokha. I-franchise nayo ingahle ibe yindlela yokuqashisa uphawu lwentengiso. Njengomthetho, kwenziwa isivumelwano esikhethekile phakathi kwe-franchisor ne-franchisee. Le yinqubo yokuthi ungayithenga kanjani i-franchise. Uqondiswa yisivumelwano ekusebenzeni komsebenzi wasehhovisi futhi ibhizinisi lakho liyakhuphuka.
Sincoma ukuthi uthenge ngqo i-franchise oyithandayo futhi ongasebenzisana ngayo nayo ngokunenzuzo, futhi uthole okuningi ngotshalomali lwakho. I-franchisor ithola imali evela kuwe ngokusebenzisa uphawu lwayo lokuhweba noma ukwazi. Futhi, ukunikezwa kwezinto zokusetshenziswa okuvame ukuhlinzekwa kusivumelwano. Izinqubo zenqubo, ukuqeqeshwa kwabasebenzi, konke lokhu kufakiwe kwinkontileka. Kwanele ukuthenga ilungelo elihambisanayo. Ungathola i-franchise yokusebenzisa wonke amaqhinga owaziwayo ozodluliselwa kuwe kumthengisi. Imibandela yokusebenzisa umkhiqizo womkhiqizo nayo ixoxiswana ngawodwana. Zingaba zombili ezikhululekile futhi ezinzima, konke kuya ngokuthi yiziphi izinhloso ezilandelwa yizinhlangothi zombili. I-franchiseees ikhokha okufanele ngokunikezwa ilungelo lokuqhuba ibhizinisi ngenkathi isebenzisa uhlelo olunalo.
Ungathenga hhayi kuphela amalungelo wokusebenzisa uphawu kodwa futhi nalo lonke ulwazi olwengeziwe, ubuchwepheshe, nezinhlobo zezinsizakusebenza ongazidinga ngesikhathi sokusebenza kwamasosha.
Isitolo se-franchise siwuhlobo lwesikhulumi lapho okunikezwa khona izinhlobo ezahlukahlukene zebhizinisi egatsheni labo ukuze kuvulwe kwelinye idolobha noma izwe. Isitolo esinjalo singasetshenziswa ngabantu abafuna ukuthuthukisa ibhizinisi labo. Isitolo esinjalo sibonakala ngokuba khona kwenani elikhulu lokunikezwayo okuhlukahlukene ngefomethi yamanje. Uma unentshisekelo kuma-franchise, ngakho-ke usesitolo sefomethi ekhethekile okufanele ufune kubo. Kubalulekile ukuthi isitolo esinjalo sibe nenombolo edingekayo yokunikezwa okufanelekile, ngaphandle kwalokho, akukho phuzu kuso. Ama-franchise nencazelo yawo kufanele anakwe, futhi isitolo sikwazi ukusiza abantu abafuna ukuthola ithuba lokwenza imisebenzi ethile yebhizinisi ngokohlelo olukhona.
I-franchise inqubo ethile noma isethi ephelele yezinto ezahlukahlukene umthengi athola ukuzisusa nokuzikhuthaza yedwa. Ngasikhathi sinye, inkampani eyathengisa i-franchise iyazisiza. Kuyinto elula kakhulu ukusebenzisa isitolo lapho izimpahla ezinjalo zibekwa khona ukuze ukwazi ukukhetha esifanelana kakhulu. Isibonelo, umtshalizimali udinga ukuphatha izinsizakusebenza zezezimali futhi ufuna ukuxhaphaza uhlobo oluthile lomkhiqizo olwaziwa umhlaba wonke. Umtshalizimali uvele aye esitolo akhethe umkhiqizo omfanela kahle kakhulu. Uma isitolo esinjalo sinencazelo eningiliziwe ye-franchise, lapho-ke ungathatha isinqumo ngokushesha khona lapho. Izimo zivame ukuxoxwa ngazodwana, futhi lapho i-franchise ithengwa ngumthengi ngaphakathi kuphela esitolo, ukuncintisana kungahlelwa. Lesi yisimo ukuze umthengi akwazi ukukhetha okuhle kakhulu kubo.
Isitolo sesimanje kumele sisebenze ngokungenaphutha, ngoba leli ibhizinisi elibi kakhulu. Izinkampani eziningi ezifuna ukungena ezimakethe ezingomakhelwane ziyakwazi ukuthola kulesi sitolo. Ungathola noma iyiphi i-franchise oyithandayo uma uya edepho enjengale. Lokhu kulula kakhulu ngoba yonke imininingwane edingekayo inikezwa kusayithi elilodwa. Ukuhlanganiswa kwawo wonke ama-franchise abe yipulatifomu eyodwa kuba idepho ngqo enikeza ithuba lokuthenga imikhiqizo efanelekile ngokwenqubo ebekiwe. Uma udinga idepho, isayithi elinjalo lingatholakala ku-Intanethi. Ngaphezu kwalokho, uma kungcono isitolo, ama-franchise amaningi akhona. Inani elikhulu leziphakamiso linikeza ithuba elihle lokwenza ukukhetha okulungile.
Incazelo eningiliziwe ye-franchise ikusiza ukuthi uqonde ukuthi iyahambisana yini nokuncamelayo nokuthi kungenzeka yini ukuyithuthukisa esifundeni esithile. Ngaphakathi kwesitolo, uyakwazi ukuqhathanisa izinketho ezahlukahlukene. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukhethe okungcono kakhulu. Ngenxa yesitolo esinelungelo, osomabhizinisi abafuna ukutshala izimali futhi basebenzise umkhiqizo okhona nowaziwayo abakwaziyo ukusebenzisa izinhlelo zabo ngokushesha nangokufanele. Kufanele kube nokuzulazula okulula ukuthola i-franchise efanele. Isitolo esinjalo sisebenza kwi-Intanethi, futhi idumela lalezo zinhlobo ezibekwe kuso kuncike ekuzinzileni nasekuvikelekeni kwalo. Ngokwemvelo, idepho enjalo kufanele ihlangabezane nazo zonke izidingo zokuphepha futhi ibe nezitifiketi ezidingekayo. Idepho yesimanje kufanele ngaso sonke isikhathi inikeze imininingwane ephelele ngemikhiqizo ayinikezayo. Isitolo se-franchise asinjalo ngoba kufanele sihlangabezane nezimfuneko zezimo zesimanje.
Ngenxa yesikhulumi esinjalo, ungaxhumana ngempumelelo nabamele izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo. Kungenzeka futhi ukuxoxisana uma isitolo se-franchise sakhiwe kahle.
Lapho ukhetha isitolo se-franchise, into esemqoka ukuthi ungalenzi iphutha, ngoba lokhu kungumsebenzi webhizinisi obaluleke kakhulu, ngoba umtshali-zimali ukhetha indawo lapho ezotshala khona izinsiza zemali. Isitolo se-franchise sinikeza noma ngubani isethi esebenzayo yokunikezwayo okuhlukahlukene. Ama-Franchise angenziwa ngokucatshangelwa imininingwane yesifunda. Imvamisa, lokhu kuyadingeka nje futhi incazelo eningiliziwe yokuthi umthengisi unikeza ziphi izimo kumthengi okumele inikezwe ngaphakathi kwesitolo. Izinyathelo ezinjalo zivumela usomabhizinisi ongaba khona ofuna ukuzibandakanya ekuthengiseni imali ukuze enze isinqumo esifanele kuhlelo olunjalo.
Ikhathalogi ye-franchise uhlu lweziphakamiso zamanje zokuthuthukiswa kwebhizinisi ezisuselwa kumkhiqizo okhona owaziwayo. Uhla lwemibhalo olunjalo lungasetshenziswa ngusomabhizinisi ofuna ukutshala izimali futhi angafuni ukwenza ibhizinisi kusuka ekuqaleni ngasikhathi sinye. Ikhathalogu ilungele umuntu onjalo. Yonke i-franchise emakethe ibhalwe lapha. Ngenxa yekhathalogi enjalo, kungenzeka ukhethe i-niche ethandwa kakhulu futhi efaneleke kakhulu. Ikhathalogi enjalo yenza futhi ukuthi ikwazi ukuxhumana ngokushesha nomthengisi futhi ibuze imibuzo enentshisekelo. Ngaphakathi kohlaka lwe-franchise handbook, akumele kwethulwe kuphela zonke izinhlinzeko ezifanele, kodwa futhi nencazelo yalolu hlobo lomkhiqizo okufanele itholakale. Ngenxa yencazelo, kungenzeka ukuthatha isinqumo sokuphatha esifanele kakhulu futhi esinekhono. Umane nje awukwazi ukwenza ngaphandle kwekhathalogi ye-franchise uma ikhasimende elingahle lifune ukukhetha inketho efanelekile kunazo zonke.
Yikuphi ikhathalogi ye-franchise engaba mahhala noma ikhokhwe incike kumnikazi wesayithi. Ngasikhathi sinye, ama-franchisors uqobo akhokhela ukuthi kungenzeka athumele kuleyo sayithi noma elinye ithuluzi lokusabalalisa ulwazi. Ngenxa yencwadi yesandla se-franchise, kungenzeka ukuheha abathengi abasha. Umthengi we-franchise ubizwa nge-franchisee. Uthola ithuba lokuqhuba ibhizinisi ngokohlelo olukhona, olunikezwa umthengi. Lolu hlelo lwakhiwa yi-franchisor, kuyilapho i-franchisee uqobo ithwala zonke izindleko zokulungiselela ezidingekayo, ukwethulwa, kanye nokusebenza kwento yebhizinisi. Lokhu kulula kakhulu kulabo bantu abanethuba lokutshala izimali zezimali kepha abafuni ukusungula okusha. Bathatha i-franchise eyenziwe ngomumo, elula kakhulu kubo. Ngakolunye uhlangothi, ikhathalogu ikusiza ukuthi wenze ukukhetha kwakho, wenze isinqumo sokuphatha esifanele kunazo zonke, futhi uthole imali engenayo ephezulu kwizimali ezitshaliwe.
Ngaphakathi kukhathalogi ye-franchise, ungacacisa ubukhulu benkokhelo yesamba. Leli inani le-franchise, elimisiwe futhi lelo i-franchisor elithola ku-franchisee ekuqaleni. Lokhu kungaba cishe u-10% wezindleko zokuqalisa eziphelele. Ngasikhathi sinye, ngaphakathi kohlaka lwe-franchise handbook, ungacacisa imininingwane echaza imigomo yokuxhumana ngemininingwane ethe xaxa. Isibonelo, incwadi ebizwa ngokuthi yibhizinisi inganikezwa njengebhonasi. Akuyona into ngaphandle komthethonqubo owenziwe ngempumelelo ovumela ukuhlelwa kwemisebenzi ngendlela esebenza kahle kakhulu. Umsebenzi ofanayo wenzelwe ukwakha ubunikazi bezinkampani, ukwethula ukukhangisa, neminye imisebenzi ephathelene nokuxhumana nabathengi. Ibhuku elibizwa ngomkhiqizo likusiza ukuthi uzulazule ukuthi ungaxhumana kanjani kahle namakhasimende angahle abe khona. Kungaphakathi kohlaka lwekhathalogi ye-franchise kuphela, lezi zinto kufanele zichazwe ngokuningiliziwe futhi lokhu kusiza ongahle abe yikhasimende enze isinqumo esifanele.
Uma ikhathalogu yama-franchise isesikhathini, khona-ke ibala konke ukunikezwa kwamanje namakhasimende angaba khona angathola okuhle kunakho konke. Ikhathalogi enjalo ivumela ukuthengisa ama-franchise amaningi ngoba wonke atholakala kusayithi elilodwa. Ikhathalogi kufanele yakhelwe kahle futhi yenziwe kahle. Izinyathelo ezinjalo zenza kube lula ukuzulazula futhi zenze ukusetshenziswa kwekhathalogi kube okuphumelela kakhulu futhi okumnandi ngendlela yekhasimende. Uma udinga ikhathalogu, kungcono ukuyihlanganisa kahle nangempumelelo. Ama-franchise kufanele anikezwe ukunakekelwa okudingekayo ukuqinisekisa ukuthi awekho amaphutha wezinto ezibonakalayo avela encazelweni yawo. Ngenxa yohlu lwe-franchise, amakhasimende amaningi angahle akwazi ukuthola abathengisi bawo futhi ibhizinisi lizoqala ukuthuthuka, futhi wonke amagatsha amasha azovulwa emadolobheni nasemazweni angomakhelwane.
Ikhathalogi ye-franchise ephumelelayo kufanele ifakwe ukuhambisa okulula kumsebenzisi ukuze akwazi ukuthola isisombululo esifaneleke kakhulu. Ngenxa yencwadi yesikhwama se-franchise wonke umthengi uyakwazi ukubhekana nanoma yikuphi ukusebenza kwabefundisi njengengxenye yokuthola imininingwane evumelana nabo kakhulu.
Ibhizinisi lama-franchise kufanele likhuthazwe ngaphansi kwemithetho enikezwe ngumthengisi. Umthengisi ubizwa ngenye indlela ngokuthi i-franchisor futhi wehlukile ngokuthi ukuze ilungelo lokusebenzisa ulwazi noma uphawu lokuhweba, uthola inani elithile lemali kulokho okubizwa ngokuthi i-franchise. Okufanayo, kuphoqelekile ukuthi kukhokhwe iminikelo, edluliselwa ilungelo lokwenza ibhizinisi kusetshenziswa uhlelo olunikeziwe. Uhlelo luthuthukiswa ngabamele i-franchisor, kanti zonke izindleko zokuqalisa nokulungisa ibhizinisi zithwalwa ngumtholi uqobo.
I-franchise, ngakolunye uhlangothi, uhlelo olusebenza kahle oluchaza ngokuningiliziwe zonke izinqubo, izimo, nezici, ezivumela ukuqhuba ibhizinisi kahle kakhulu. Ngasikhathi sinye, inqubo yokwenza ibhizinisi kufanele ihambisane ngokuqinile nezicelo ze-franchisor. Kungaleso sikhathi lapho i-franchise isebenza ngempumelelo ngangokunokwenzeka, futhi ibhizinisi linikezwa inani lokunakwa elikudingayo. Osomabhizinisi abaphumelele kakhulu abakwazi ukukopisha ngokuphelele imisebenzi yokubhala, futhi abanye babo benza nokuthuthuka kwabo. Konke ukusebenza ngisho nezinguquko kuxoxwa ngakho nomthengisi, njengoba lena kuyimithetho.
Ngemuva kokuphela kwenkontileka, kungenzeka ukuqala ibhizinisi usebenzisa i-franchise. Izinyathelo ezinjalo zivumela umthengi ukuthi enze ngokushesha inzuzo ekutshalweni kwezimali ngoba ukwenza i-franchising akuyona into ngaphandle kokutshalwa kwezimali kwezimali kumodeli ekhona, ethuthukile futhi efakazelwe. Le modeli yebhizinisi ivumela ukusebenza ngokufanele kwehhovisi, kucatshangelwa imininingwane yesifunda. Kwesinye isikhathi i-franchise ayisebenzi nje uma izinqubo zebhizinisi zakhiwe ngokungafanele noma indawo ezungezile ingafani naleyo eyayisekhaya lephrojekthi.
Ibhizinisi le-franchise lingabonakala nsuku zonke emigwaqweni yamadolobha akho. Kungaba yinoma iyiphi ikhefi, isitolo, indawo yokugunda izinwele, noma enye inhlangano. Ngisho nabakwaMcDonald's neKFC bangama-franchise anezinga eliphezulu kakhulu lokuthandwa. Konke ukuvula i-franchise nokwenza izenzo zebhizinisi ngokulandela uhlelo kubekiwe esivumelwaneni. Isivumelwano siphethelwa ukulawula zonke izingxabano futhi ukuze iqembu ngalinye lazi amalungelo nezibopho zalo. Uma uzokwenza ibhizinisi lama-franchise, kufanelekile ukukhetha uhlobo lwebhizinisi olufanele kakhulu. Futhi, ukubheka imininingwane yemisebenzi esifundeni sakho kubaluleke kakhulu. Njengesibonelo, singacabanga ukuthengiswa kwama-pancake ngabakwaMcDonald's eRussia. Ithuba lesimanje lokuqhuba ibhizinisi lama-franchise linikeza cishe amathuba angenamkhawulo wempumelelo kulabo bantu abanezinsiza zezezimali zamahhala futhi abafuna ukuzitshala ngempumelelo.
Lolu hlobo lwebhizinisi lusebenza kangcono kunokuphromotha umkhiqizo kusukela ekuqaleni. Usomabhizinisi othile usevele ukwazile ukuthuthukisa imodeli enjalo futhi ahlanganyele amava akhe ngephesenti elithile. Lokhu kulula kakhulu ngoba ibhizinisi lama-franchise likunikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi ungasunguli lutho olusha, kepha usebenzise inketho ekhona ephumelelayo. Ibhizinisi elinjalo ngokuqinisekile lisebenza ngempumelelo uma yonke imisebenzi yokukhiqiza yenziwa ngokuya ngemigomo ebekiwe kwinkontileka. Ibhizinisi le-franchise lizothuthuka ngesivinini esisheshayo uma izinguquko kuvunyelwana ngazo nomthengisi, okuzocubungula imininingwane yesifunda.
Kulabo abafuna ukuqala ibhizinisi lama-franchise, isiza esikhethekile, ikhathalogi, noma isitolo siyadingeka, lapho kunikezwa khona konke ukunikezwa kwamanje emakethe. Ngosizo lwekhathalogi enjalo, ungakhetha kalula inketho efaneleke kakhulu. Sebenza nebhizinisi le-franchise, ukhetha umkhombandlela ofanele kakhulu ongabhekana nawo ngempumelelo nomsebenzi owenzayo. Ngenxa yebhizinisi lama-franchise kuphela, abantu abaningi bakhulise kakhulu imali yabo yokuqala. Ngemuva kokutshala imali ebhizinisini lama-franchise, ungathemba ukuthola izinga eliphezulu lemali engenayo. Imbuyiselo kulokhu kutshalwa kwezimali imvamisa iphakeme impela. Lokhu yilokho okuqinisekisa izinga eliphakeme lokuthandwa kwalolu hlobo lwebhizinisi. Abantu abaningi bafuna nje ukutshala izinsizakusebenza zezezimali kumodeli esivele ihlolwe yacwengwa eminyakeni edlule.
Yabelana nabangani bakho noma uzigcinele ikheli laleli khasi
Ukuphathwa kwesayithi: info@FranchiseForEveryone.com
Youtube Izindaba isiteshi
Uma ubona i-typo, ukuyilungisa, khetha umbhalo oyiphutha negundane bese ucindezela inkinobho ethi Enter
Uma ubona i-typo, chofoza lapha ukuyilungisa